ဆွဲဆောင် မှု ရှိလှတဲ့ အဖြူရောင် ဝတ်စုံလေး နဲ့ မိမိုက် နေပြီး ရင်ဖို ချင် စရာကောင်း လွန်း နေတဲ့ ဖူးပွင့် သခင် – Cele Posts
ချစ်ပရိသတ် ကြီးရေ…ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ အပြုံး ချိုချိုလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဖူးပွင့်သခင် ကတော့ ပုရိသပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင် မှုကို အခိုင်အမာရရှိ ထားတဲ့ ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေ၊ကြော်ငြာ ရိုက်ကူးရေးတွေမှာ မကြာခဏမြင်တွေ့နေရတဲ့သူမ ကတော့ အနုပညာလောကမှာ တစ်စထက်တစ်စ နာမည်ကျော်ကြား ရေပန်းစားလာတဲ့ သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းတွေနဲ့ စွဲမက်ဖွယ် ဘော်ဒီအလှတွေနဲ့လည်း ပုရိသပရိသတ် တို့ရင်ကိုဖမ်းစားထားတဲ့ သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက် မှာလည်း ဖူးပွင့်သခင်က ပြည်တွင်း ခရီးစဉ်တွေကို သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ အမိုက်စားပုံလေး တွေကို တင်ပေးလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးဖြစ်တဲ့ အဖြူရောင် ဝတ်စုံလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ ပိုစ့်ပေး ဓါတ်ဖမ်းနေတဲ့ အလန်းစား ပုံလေးတွေကို တင်ပေး လာတာဖြစ်လို့ ချစ် ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုစေနိုင်ရန် အတွက် ပြန်လည် ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ ပုံလေးတွေတိုင်းက ကိုရီးယား မင်းသမီးလေး လို အလှပိုနေတာဖြစ်ပြီး ရင်ဖိုချင်စရာကောင်းလွန်း နေတာဖြစ်လို့ ကြည့်မိသူတိုင်း အကြိုက်တွေ့မိစေမှာ အသေအချာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ…ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကလည်း ဖူးပွင့်သခင်ရဲ့ ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး အသည်းလေးတွေ ပေးခဲ့ဖို့ မမေ့လိုက်ပါနဲ့နော်. ။ ဒါ့အပြင် ဆက်လက် လျှောက်လှမ်းမယ့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ကိုလည်း ပရိသတ်တွေက အားပေး လိုက်ကြပါဦးနော်….. ။
ဆှဲဆောငျ မှု ရှိလှတဲ့ အဖွူရောငျ ဝတျစုံလေး နဲ့ မိမိုကျ နပွေီး ရငျဖို ခငျြ စရာကောငျး လှနျး နတေဲ့ ဖူးပှငျ့ သခငျ
ခဈြပရိသတျ ကွီးရေ…ခဈြစရာ ကောငျးတဲ့ အပွုံး ခြိုခြိုလေးတှေ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဖူးပှငျ့သခငျ ကတော့ ပုရိသပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးခဈြခငျ မှုကို အခိုငျအမာရရှိ ထားတဲ့ ပွညျသူခဈြ အနုပညာရှငျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဗီဒီယို ဇာတျကားတှေ၊ကွျောငွာ ရိုကျကူးရေးတှမှော မကွာခဏမွငျတှနေ့ရေတဲ့သူမ ကတော့ အနုပညာလောကမှာ တဈစထကျတဈစ နာမညျကြျောကွား ရပေနျးစားလာတဲ့ သူလေးလညျးဖွဈပါတယျ။ အမိုကျစား ကောကျကွောငျးတှနေဲ့ စှဲမကျဖှယျ ဘျောဒီအလှတှနေဲ့လညျး ပုရိသပရိသတျ တို့ရငျကိုဖမျးစားထားတဲ့ သူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီတဈခေါကျ မှာလညျး ဖူးပှငျ့သခငျက ပွညျတှငျး ခရီးစဉျတှကေို သှားရောကျ လညျပတျခဲ့တဲ့ အမိုကျစားပုံလေး တှကေို တငျပေးလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အလနျးစား ဖကျရှငျလေးဖွဈတဲ့ အဖွူရောငျ ဝတျစုံလေးနဲ့ ဆှဲဆောငျမှုရှိရှိ ပိုဈ့ပေး ဓါတျဖမျးနတေဲ့ အလနျးစား ပုံလေးတှကေို တငျပေး လာတာဖွဈလို့ ခဈြ ပရိသတျတှေ ကွညျ့ရှုစနေိုငျရနျ အတှကျ ပွနျလညျ ဖျောပွပေး လိုကျပါတယျနျော။
ဖူးပှငျ့သခငျရဲ့ ပုံလေးတှတေိုငျးက ကိုရီးယား မငျးသမီးလေး လို အလှပိုနတောဖွဈပွီး ရငျဖိုခငျြစရာကောငျးလှနျး နတောဖွဈလို့ ကွညျ့မိသူတိုငျး အကွိုကျတှမေိ့စမှော အသအေခြာ ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကဲ…ခဈြရတဲ့ ပရိသတျတှေ ကလညျး ဖူးပှငျ့သခငျရဲ့ ပုံလေးတှကေို ကွညျ့ပွီး အသညျးလေးတှေ ပေးခဲ့ဖို့ မမလေို့ကျပါနဲ့နျော. ။ ဒါ့အပွငျ ဆကျလကျ လြှောကျလှမျးမယျ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှေ ကိုလညျး ပရိသတျတှကေ အားပေး လိုကျကွပါဦးနျော….. ။